Shiinaha 10.1 inch full HD IPS taabashada shaashadda wireless WiFi sawir sawir sawir dijital ah oo loogu talagalay soo-saarka qoyska Soo-saar iyo Warshad | Buug-gacmeedka
10.1 inch full HD IPS taabashada shaashadda wireless WiFi sawir sawir dijitaal sawir jir for bandhigay qoyska
Hadiyad Jacayl oo loogu talagalay Qoyska: Maxaa ka macaan badan inaad cusbooneysiiso nolol maalmeedkaaga qoysaskaaga fog? Nooca caadiga ah ee 10 FHD Wi-Fi daruuraha sawirku wuxuu noqon karaa xulasho kalgacal leh oo lagula xiriiri karo kuwa aad jeceshahay. Iyadoo si fudud loo dejinayo, qoysaskaaga iyo asxaabtaada ayaa heli doona isla markiiba shaashaddaadii ugu dambeeyay ee lagusoo bandhigay sawir sawir leh oo ku xiran Wi-Fi.
Muuqaal Cajiib ah oo Full HD IPS ah: Wi-Fi-ga daruuriga ah ee muuqaalka ah ee dariiqa ah 10 FHD ayaa si weyn u wanaajiyay tayada sawirka si uu kuu siiyo khibrad muuqaal oo heer sare ah. Shaashad taabasho tayo sare leh oo 10.1 ah oo leh 1920 * 1200 Full HD qaraarka ayaa si buuxda dib ugu soo muuqan kara faahfaahinta iyo midabada xusuustaada qaaliga ah. Muuqaalka otomaatiga ah wuxuu awood u siinayaa ku habboonaanta-muuqaalka muuqaalka, iyadoon loo eegin sidaad u dhejisey qaabkan, sawirka, muuqaalka, ama derbiga.
Wadaagista Bilaashka ah ee Meel Kasta: Wi-Fi sawir-gacmeedka ku xiran wuxuu leeyahay faa iido weyn wadaagista deg-degga ah ee wireless-ka ah qaabka sawir-dhaqameedka dijitaalka ah. Adiga, qoysaska iyo asxaabtaada waxaad daqiiqadaha la wadaagi kartaan App, emayl, ama kumbuyuutar, meel kasta, iyo waqti kasta.
In ka badan 40,000 Sawir oo la kaydiyay: Iyada oo lagu dhex dhisay 16GB xasuusta (qiyaastii 40,000 oo sawir oo ah 300KB / pc), waxay bixisaa meel lagu keydiyo oo baaxad weyn ku filan sanado badan oo la isticmaalo. Waxa kale oo aad u dhoofin kartaa faylasha aad heshay kaadhka SD-ka ee fidsan ama USB drive-ka ee maareynta albumka.
Ka Fududaan Waligeed: Naqshadeynta ku-xirnaanta isticmaale-saaxiibtinimo waxay ka dhigeysaa mid si fudud loo isticmaali karo da 'kasta. Kaliya dhowr tallaabo oo lagu dhammaystirayo dejinta iyo shaashadda taabashada dareenka leh ayaa ka dhigaysa isticmaalka mid aad uga fudud sidii hore.
1. Si otomatig ah u-wareeji Hawsha Muuqaalka Muuqaalka ama sawir qaabeynta qaabka aad jeceshahay
2. Way fududahay in la dejiyo Share Memories Precious iyada oo loo marayo SSA Wifi Frame APP: 1. Soo dejiso APP bilaash ah; 2. Isdiiwaangal APP oo kuxiran qaabkaaga; 3. Xullo sawirro iyo fiidiyowyo aad wadaagto
3. 10.1 inch HD Sawirka Xiriirka IPS. Iyada oo leh Sawir, Muusig Video ah, saacad, Qaylo-dhaan, Jadwalka, Cimilada
4. Si dhakhso ah u Wadaag Hesho wakhti kasta iyo Goob kasta
5. Waxay kuxirantahay WiFi waxayna taageertaa dejinta luuqado badanPlug Nooca: EU Plug, wuxuu khuseeyaa Indonesia, Germany, France, Spain, Italy iyo wixii la mid ah
Cabbirka: 263 x 182 x 26mm
1 x sawir sawir ah
Kaliya waxyaabaha ku jira xirmada kor ku xusan, alaabada kale kuma jiraan.
Fiiro gaar ah: Toogashada fudud iyo bandhigyada kaladuwan waxay sababi karaan midabka shayga ku yaal sawirka oo waxyar ka yara duwan waxa dhabta ah. Qiyaasta cabirka la oggol yahay waa +/- 1-3cm.
Hore: Caan caan ah 15 inch hd loop play sawir fiidiyoow sawir dijitaal ah album sawir sawir dijitaal ah qaab sawir dijital ah
Xiga: Hot 15 inch nidaamka Android 1 + 8G xasuusta diro sawir video meel fog Digital calaamado bandhigay jir sawir digital
Iibinta kulul 1280 * 800 Ips Panel 10 inch LCD Digital ...
12.5inch WiFi Digital Cloud Cloud daruur sawir f ...